भाेलीबाट बिधालय बन्द गर्नु पर्ने नत्र लकडाउनकाे घाेषणा गर्ने : डा. जागेश्वर गौतम – Purbi sanchar
२०७८ बैशाख २, बिहीबार १९:५२
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लाका सहरी क्षेत्रका सबै स्कुल भोलिदेखि नै बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार यी क्षेत्रमा विद्यालय बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङ रहेका छन् ।
त्यहाँका सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । “त्यहाँ विद्यालय बन्द नगरे लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अपिल जारी गर्दै भीडभाड हुने क्षेत्र तत्काल बन्द गर्न भनेका थिए । १४ जिल्ला अति प्रभावित भएकाले सचेत रहन उनको अपिलमा आग्रह छ ।